Olof Amkoff, အဝေးညာဘက်ပုံနှင့် Donald Appelfeldt ငါ၏အလက်ဝဲရန်။ သင်းအုပ်ဆရာသောမတ်စ် Scull သူ့ဇနီးပတ္တမြားနှင့်၎င်းတို့၏ကလေးငယ်များနှင့်အတူမြင်ကြ: စာရာအဲလစ်ဇဘက်နှင့် Tomasi ။
1998 သူ့ကိုကိုးကှယျခွငျး "cultos" ရှိသည်ဖို့ဆက်လက်စစ်အစိုးရကပိတ်ပင်ထား, သူသည်ထောင်ထဲမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့သည်။
သူကတစ်ပါတ်အကြာတွင်သေဆုံးမီကျူးဘားမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်တွင်, ငါအချိန်နှင့် Kalle Appelfeldt အင်တာဗျူးသင်းအုပ်ဆရာဖာနန်ဒို Leyva ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူလကျ၌ကျမ်းစာနဲ့အလယ်၌ရပ်။
ကွန်မြူနစ်များနှင့်တိုက်သော်လည်းအသင်တို့သည်မာက်စ်ဝါဒီ MPLA ပြောက်ကျားယူဆောင်
သူဟာကွန်မြူနစ်ကြီးကက်စထရိုရဲ့တော်လှန်ရေးထဲမှာယုံကြည် 1975 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သောပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်း UNITA ပြောက်ကျားဆန့်ကျင်မာက်စ်ဝါဒီ MPLA ပြောက်ကျားခြမ်းစစ်တိုက်ခြင်းငှါအင်ဂိုလာကိုစလှေတျခဲ့သညျ။
သူကအင်ဂိုလာနှစ်နှစ်ဘက်မှာစစ်တိုက်နှင့် 10 နှစ်အတွင်းတက်ကြွစွာအရာရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ အင်ဂိုလာအတွက် 40,000 ကျူးဘားစစ်သား, 15000 သေဖာနန်ဒိုအဘယ်သူမျှမမုဆိုးမရဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျန်ရစ်သူမှပေးဆောင်အခြားမည်သည့်အကူအညီများ, သူသူကသူတို့ထဲကနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ယုံကြည်ရပ်တန့်ကြောင်းစစ်အစိုးရနှင့်ကွန်မြူနစ်ဝါဒနှင့်အတူစိတ်ပျက်ခဲ့ကွောငျးအားကြားပြောလေ၏အခါ။
မိမိအဝမ်းကွဲရဲ့7နှစ်အရွယ်သမီး 1990 ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်သွားသည့်အခါသူကအသုဘမှာပစ္စုပ္ပန်ကြီးနှင့်သူရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ဘဝကြောင်းသခင်ယေရှု၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောသောသူရှိ၏။ ထို့နောက်သူကတစ်လအကြာမှာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, သူ၏ဇနီးခဲ့သည်။
သူမကခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံသည့်အခါသူ့ကို 1990 ခုနှစ်ထောင်ချခံရရှိသည်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သူတစ်ဦးကအမျိုးသမီးပါတီလှုပ်ရှားသူ, သူကသာမကြာသေးမီကတွေ့ဆုံခဲ့သည်!
ဖာနန်ဒိုဟာသင်းအုပ်ဆရာအဖြစ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့် 25000 မြို့သားတို့နှင့်အတူ Bejucal သူ့အိမ်ကမြို့အတွက်တစ်ဦးဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါလွတ်မြောက်မှုကိုဘာသာရေးနှစ်ခုစလုံးတစ်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းနှင့်စစ်အစိုးရဖော်ရွေနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဖြစ်ရှိ၏။ အခုတော့အသက် 15 ဧဝံဂေလိအသင်းတော်တို့အားထိုအရပ်၌ရှိပါသည်။
သို့သော်သူသည်ပိတ်ပင်မှုကိုကြိမ်းပနှင့်၎င်းတို့၏အစည်းအဝေးများနှင့်အတူဆက်လက်။ သူကလုံးဝစစ်အစိုးရကသူတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပျောက်ဆုံးသွားနှင့်သူမသေမှီတိုင်အောင် "ခရစ်တော်" တွင်သူတို့၏ယုံကွညျခွငျးကိုပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအပေါ်ရဲဝံ့စွာသက်သေခံခဲ့သည်။
မကြာသေးခင်ကသူယုံကြည်ဖို့စစ်တပ်တွင်အဓိကဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူက (ဖာနန်ဒို၏ညာဘက်မှ) သင်းအုပ်ဆရာသောမတ်စ် Scull ကျူးဘားလုံးဝဘုရားမဲ့ဝါဒကလွှမ်းမိုးခံရခြင်းမှ၎င်း၏ 70 နှစ်ဘဝကျော်လှည့်, မာ့က်စ်, ကက်သလစ်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ယခုကြောင့်မြင်ဘူးသောသူက "ဂုဏ်ပြုခဲ့ယျတျောနှငျ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်တာဗျူးတွင်ပြောကြားခဲ့သည် ကြှနျုပျတို့ဆုတောငျးနှင့်ဇွဲတုံ့ပြန်များစွာသောတက်ကြွ Pentecostal နှင့်ကျွန်းဝန်းကျင်တွင်ဧဝံဂေလိအသင်းတော်များရှိသည်။ ကျနော်တို့နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းနှင့်အခြားအမှုအရာပေမယ့်သေသတ်ခြင်းကိုအမှန်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံပါပြီ, ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအားမိမိကတိတော်များကိုပြည့်စုံပြီ! "
လာမည့်နှစ်တွင်, စစ်အစိုးရကက 100 ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းခဲ့ကြောင်းသတိပြုပါမည်ဟု Pentecostal လှုပ်ရှားမှုကျူးဘားသို့ရောက်ကြ၏။ ဒါဟာအဖြစ်အပျက်ရုပ်မြင်သံကြားကနေမည်ဖြစ်ပြီးရည်ရွယ်ချက်တည်ဆောက်ခြင်းညီလာခံခွင့်ပြုခဲ့သည်!
Vecka 49, torsdag9december 2021 kl. 14:22